Usoro: App iji mepụta Ihe Ntaneti N'efu | Akụkọ akụrụngwa
Ntụziaka: Jiri igwe ekwentị gị mepụta ime ụlọ redio anyị n'ịntanetị
Radio na-enwe mmasị na redio dị n’ịntanetị iji na-ege ntị site na ekwentị gị? Azịza nke ọtụtụ mmadụ nwere ike ịbụ "ee" n'ihi na ebe ahụ, anyị ga-enwe ohere ịnụ ụtọ egwu dị mma, ọgbakọ na-atọ ụtọ ma ọ bụ naanị mmemme ebe a na-eme ka isiokwu mara mma maka anyị na ndị ọzọ mara.
Ọ bụrụ na kama ịjụ ihe a chọrọ tupu anyị ekwuo Nwere ike ịmepụta redio n'ịntanetị site na ekwentị gị? Ikekwe azịza ya dị iche na ihe anyị kwuru na paragraf gara aga, n'ihi na anyị nwekwara ike ịnwe isiokwu na-atọ ụtọ ịkọrọ ndị ọzọ ma anyị enwebeghị ike ịme ya n'ihi na ọ bụ naanị redio dị iche iche na ntanetị na-ejikwa ihe niile na ebee, enyeghị ohere ị na-achọ ịchọta. Bara uru nke ọma na ngwa a akpọ Instaradio ị nwere ike ịmalite ịmalite ịkwalite onwe gị na netwọkụ mmekọrịta site na ịmepụta redio nke gị.
1 Kedu otu Instaradio si arụ ọrụ na igwe mkpanaka anyị?
2 Nyochaa na imepụta isiokwu maka ndị ọzọ na Instaradio
Kedu otu Instaradio si arụ ọrụ na igwe mkpanaka anyị?
Nke a bụ akụkụ kachasị adọrọ mmasị na ya niile, agbanyeghị, ị ga-achọ ekwentị mkpanaaka yana ụdị nke ọzọ iji wụnye ha; Anyị na-akwado ka ị buru ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta, ebe ị ga-ahụ ihuenyo nke yiri nke ahụ anyị debere n'elu. A na-edozi nsụgharị abụọ ahụ n'ebe ahụ, ya bụ, uotu maka gam akporo na otu maka iOS; Anyị ga-ekwusi okwu ike na ngwa ọrụ ahụ dabara nke ọma na ekwentị mkpanaaka na ọ bụghị na mbadamba, nke pụtara na anyị ga-eji ya na ọnọdụ kwụ ọtọ.
Mgbe anyị na-agba ọsọ Instaradio mgbe ibudatara ma wụnye ya, anyị ga-ahụ ihuenyo nnabata, nke ga-atụ aro ịmepe akaụntụ nnabata na ọrụ ha. Maka nke a, anyị nwere ike iji:
Ntanetị mmekọrịta anyị na Facebook.
Anyị na-akwado gị ka ị jiri otu n'ime netwọkụ mmekọrịta abụọ anyị kpọtụrụ aha n'elu n'ihi na nke a, anyị ga-ezere iji ụdị cumbersome na ọtụtụ oge, na-arịọ maka ozi anyị na-achọghị inye. Na mgbakwunye, na netwọkụ mmekọrịta anyị ga-enwe ohere nke bido kpokuo ndi enyi anyi ka ha ge nti ihe anyị ga-ebido ịme na redio dị n'ịntanetị. Maka nke a, ikwesiri mekọrịta Instaradio na netwọkụ mmekọrịta nke gị na ị nwekwu mmekọrịta yana nke enwere ndị kọntaktị na ndị enyi ịkekọrịta otu isiokwu.
Nzọụkwụ ọzọ ị ga - esorịrị Instaradio dị na profaịlụ gị, ebe ị ga - emerịrị ihe ka mmadụ niile wee buru gị n'uche n'oge ụfọdụ. Ọmụmaatụ, foto, obere nkọwa nke gị nakwa, ịkpọ ndị enyi ị nwere na netwọkụ mmekọrịta bụ ihe mbụ ị ga - eji ahazi ekwentị gị n’ịntanetị.
Nyochaa na imepụta isiokwu maka ndị ọzọ na Instaradio
Mgbe ị mechara ịhazi akaụntụ gị dị ka ihe anyị tụrụ aro n'elu, ị ga-awụlikwa ngwa ngwa Instaradio na ebe, nhọrọ ole na ole ga-egosipụta n'elu ya, nke ga - enyere gị aka:
Chọọ ọrụ ndị ọrụ Instaradio ndị ọzọ.
Jiri njin nchọgharị dị n’ime iji chọta otu redio (ma ọ bụ họrọ otu n’ime ndị ama ama edepụtara ebe ahụ).
Nyochaa ihe omume nke na - eme redio i kere.
Bido jiri redio dị n'ịgbasa akara nyocha gị.
Ga-ahụ nke ikpeazụ a na-ahọpụta akara ngosi igwe okwu (gburugburu uhie) emi odude ke utịt niile nhọrọ n'elu mmanya nke interface. Ọ bụrụ na ịhọrọ, ị ga-enweta ozi na-agwa gị na ị na-amalite ịmalite ndekọ na Instaradio. I kwesịghị ichegbu onwe gị banyere ebe nchekwa dị na ngwaọrụ mkpanaka gị, ebe ọ bụ na ihe niile ị dekọtara ga-echekwa na ọrụ nke ngwa ịntanetị a.
Nwere ike ikwu okwu ogologo oge ịchọrọ yana gbasara isiokwu ị kachasị achịkwa, ihe nke ndị na-eleta profaịlụ gị nwere ike ịtụle ma emesịa. Ọ bụ ihe amamihe na ị na-arụ ọrụ a n'ebe dị jụụ ebe mkpọtụ ikuku na-adịghịN'ihi na mma ihe ndekọ gị dị, ọ ga - eme ka ewu ewu na ọdụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ntụziaka: Jiri igwe ekwentị gị mepụta ime ụlọ redio anyị n'ịntanetị
[Nkwupụta] Mgbatị na nchedo
Ọnụ ego: Chọta ngwaahịa na ọnụ ala dị ala na ahịa